Shiinaha Mini Excavator 1 Ton - ME10 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Bonovo
Qodista Yar 1 Ton - ME10
Qashin qubka Mini, oo mararka qaar loo yaqaan karo qodayaal yaryar oo gacan ka geysan kara sidii loo fududeyn lahaa shaqooyin badan oo xagga warshadaha iyo ganacsiga ah. Caadi ahaan laga bilaabo 1 tan ilaa 10 tan, qashin-qodkan yar wuxuu ku siinayaa awood aad ku siyaadin karto waxsoosaarka iyo waqtiga waqtiga shaqada ugu adag uguna xaddidan.
Jaantus Gaar ah oo ME10 ah
Miisaanka Mashiinka 882kg
Awoodda baaldi 0.025m3
Nooca baaldi Backhoe
la soco dhererka guud 1090mm
Nadiifinta dhulka 380mm
Gacan gacan dabacsan 733mm
Baaxadda Gawaarida 946mm
Baaxadda raadinta 180mm
Joogga dhererka 320mm
dhererka guud 2550mm
dhererka guud 1330mm
Guud ahaan Halbeegyada ME10
Max Raadius Raadinta 2400mm
Qoto Dheer Max 1650mm
Dhererka Max Qodista 2490mm
Dhererka Max-dejinta 1750mm
Max Qoto qoto dheer 1400mm
Meelaha wareega ee Mini 1190mm
Dhererka wiishka Max Dozer 325mm
Dhererka qodaya Max Dozer daab 175mm
Codsiyada - Qodista yaryar iyo yar yar waxay ku haboon yihiin mashaariic yar yar sida dib u dhiska magaalooyinka, dhul beereedka iyo dhowrista biyaha iyo dhismaha meelo cidhiidhi ah oo kala duwan.
Mini excavators waa mashiinno loo isticmaali karo adeegsiyo kala duwan, sida qodista, duminta iyo dhul-gariirka. Waxaa jira kuwo kala cabiran iyo awoodo kaladuwan, waxay kuxirantahay shaqada laqabanaayo waana kuwa aad waxtar u leh marka la sameynayo howlaha beeraha Qodida, qodida, duminta, sima dhigida, qodida, qodida, dhismaha, dhismaha, jiidida ama waxqabadyo kale oo laxiriira ayaa looga baahanyahay gurigaaga ama goobta ganacsiga, ama xitaa waxay noqon kartaa dhul iska caadi ah, waxaad ka fiirsan kartaa inaad isticmaasho qodid mini yar shaqooyinkan.
Imisa ayuu yahay Qodistaada Yar?
Waa inaad had iyo jeer isbarbar dhigtaa markaad fiirineyso qiimayaasha yaryar. Isbarbar dhig qeexid kasta oo la socota qod kasta.
Qiimayaashu way kala duwan yihiin iyadoo kuxiran arrimo badan. Hubso inaad fahantay iyaga haddii aad rabto inaad hesho heshiiska ugu fiican.
Tixgeli magacyada summadaha, wixii lifaaqyo ah ee lagu soo daro, intee in le'eg ayay u damaanad qaadaysaa qodista.
Kasta oo ikhtiyaar kuugu habboon, weydii iibkayaga xirfadeed, khibradeena ayaa ku siin doonta jawaab sax ah. Waad jeclaan doontaa inaad haysato qodid dhammaantiis adigu!
Hore: BONOVO Dhexdhexaad Digger xcavator mashiinka dhaqaajiya Dunida qodista
Xiga: Mini Excavator 1.6Tons - ME16
Qodista yaryar oo jaban oo iib ah
jcb mini qodayaal
kobelco mini qodista
qodayaasha yar yar ee qashinka yaryar
qodayaal yaryar oo iib ah qiimo jaban
super micro qodayaal
qashin-qode yaryar oo takuchi ah oo iib ah
Qodista Volvo mini
BONOVO Dhexdhexaad Digger xcavator dhul-dhaqaaqa mach ...
BONOVO DIGDOG DG10 Mini Excavator leh dhowr ...